Linus Torvalds Kudzoka: kusimbiswa uye kuvandudzwa | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds akafunga kuenda padivi kwechinguva chekusimudzira kernel kernel, senge zvakanaka isu kuzivisa pano. Icho chikonzero chaisave chekuti aive asiri kufara nechirongwa chake, kana kuti iye aida zororo, chikonzero chekurega kwake chaive chimwe chinhu chakadzama. Kutevera kuburitswa kweRC yekupedzisira iyo yaakazvishambadzira muLKML, akakumbira ruregerero muemail imwechete uye achiratidza kuti arikubuda kwechinguva kuti agamuchire rubatsiro uye kuyedza kubata neshoko rake raanoshandisa iye pachake kune vanogadzira kernel kana chimwe chinhu chiri zvisizvo. Wese munhu anoziva kuomarara kwemamwe emitsara yemusiki ...
Zvakanaka, mushure memwedzi kana zvakadaro kure nehutungamiriri hweiyo kernel, iyo yanga iri mumaoko eruoko rwerudyi rwaLinus panguva ino, weGerman Greg, zvino adzokakana. Uye ini ndinovimba ndakazviisa zvine simba, mazano matsva uye nedambudziko iro rakagadziriswa kudzivirira kuita kuti vanogadzira vanzwe zvakashata. Izvo zvinogona kuve zvinovaka muviri kune iyo kernel chirongwa, sezvo zvaizokwezva vazhinji vanogadzira izvo zvino vasingatyi kupa kodhi yekutya mazwi makukutu emusiki kana paine chakashata kana isiriyo kodhi.
Imwe yematanho ekutanga ayo Torvals achatora kana adzoka kubva kuhope kwake achange ari sangana neanenge makumi matatu kana makumi mana evakagadziri misimboti mikuru yeLinux kernel sezvo zvave zvakajairika gore rega rega, musangano wakavharwa-musuwo wekukurukura zvinopfuura zvinhu pamusoro pekuchengetedza kernel, asi zvakare nezvezvinhu zvemunhu. Sezvo isu tichiziva kuti musangano wakambosendekwa uye vanogadzira vakaramba kuubata pasina iye. Ikozvino zvinoita sekunge zvese kana zvishoma zvinodzokera kune zvakajairwa, asi zvinoramba zvichionekwa kuti iyo yakavandudzwa Linus Torvalds ichave yakaita sei.
Musangano uyu uchave pa Vhura Source Source Summit yeEurope izvo zvichaitika muElinburgh, Gumiguru 22-24, 2018. Linus Torvalds haina chitarisiko cheruzhinji chakarongwa pachiitiko ichi, asi ichave nguva yakanaka yekuita musangano wevafundisi uye kukurukura zvese zvinoda kukurukurwa. Zvino neCode yeMufambiro nyowani yakaitwa, iyo yanga isingafarirwe nemunhu wese uye iri nyaya yekukakavadzana sezvatatotaura, uye kudzoka kwaTorvalds, tichaona mafambiro anoita zvese mumazuva mashoma anotevera. Greg Kroah-Hartman atozivisa kare kuburitswa kwa4.19 uye akataura muemail kuti ari kusiya rairo zvakare kuLinus ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds Dzoka: yakapihwa simba uye yakavandudzwa
Iyo nyowani Linux kernel 4.19 inosvika nerutsigiro rweWi-Fi 6 uye nezvimwe
Poppler rakanakira rairo yekushandisa turu yePDF